सुदूपश्चिममा ‘वल्के’ मनाइँदै
August 17, 2020 3:04 pm
Share : 102
धनगढी । परम्परागत रुपमा मनाइने मौलिक चाड ‘वल्के’ आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मनाइँदै छ । भदौ १ गते अर्थात्प संक्रान्तिको दिन मनाइने वल्के भन्नाले ‘कोसेली’ अर्थात् ‘उपहार’ भन्ने बुझिन्छ ।
यो चाडमा आफ्ना मान्यजन र छरछिमेकीलाई सगुनका रुपमा पिँडालुको कलिलो पात, दूध, दही दिएर स्वागत गर्ने चलन छ । यो चाडमा विशेष गरि विवाहित छोरीलाई माइतीघरमा आमन्त्रण गरी लाउन, बावर, माणा, निसौसे, डुब्का लगायतका स्थानीय खानाका मीठा परिकार पकाएर खुवाउने र खाने प्रचलन छ ।
भँगेरी प्रजातिको फूलको बोटका पात टिपेर सिलौटामा पिँधेर बनाइएको मेहेन्दी हत्केला र खुट्टाको औँलामा लगाएर रङ्गाउने चलन पनि छ । भँगेरी फूलको लेदोबाट हत्केला र खुट्टाको औँलाको छाला रातो हुने र यसले बर्सातको मौसममा खेतबारीमा काम गर्दा हात र खुट्टामा देखिने छालासम्बन्धी रोगको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिने जनविश्वास छ ।
सदियौँदेखि मानाइँदै आइएको यो चाडको रौनक र महत्वका बारेमा वृद्धवृद्धा केही जानकार रहे पनि नयाँ पिँढीका युवायुवतीमाझ भने यो चाडले प्राथमिकता त्यति धेरै परेको देखिँदैन । खासगरी सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा यो चाड हर्षोल्लासपूर्वक मनाइने गरेको छ । यसपटक भने कोरोना महामारीले विगतका वर्षजस्तो खुलेर यो चाड मनाउन केही समस्या भएके पाइएको छ । वल्केका अवसरमा गाउँ गाउँमा पिङ खेलेर मनाउने पनि गरिन्छ ।
September 11, 20205:05 pm
प्रमोदको ‘तिम्रै लागि हो भने’
September 9, 202010:13 pm
माछी पर्यो जालैमा
September 8, 20207:33 am
कस्तो छ तपाईँको आजको दिन (राशिफल)
September 5, 202012:39 pm
जाग सरकार !
September 5, 202010:26 am
‘धानै कुट्ने ढिकी’ पल र एलिजाको जमेको जोडी
August 23, 20204:19 pm
निर्मला ! निर्मला ! निर्मला !
August 20, 20203:31 pm